Unique Auto Carmudi Myanmar [Burma]
09771391484 (Yangon) English (EN)	မြန်မာ (MY)	E-mail seller	Unique Auto	Certified dealer	Your name
Unique Auto –
No.4, 10th Street, Thirimon Housing, Bayint Naung, Mayangone Tsp.
We are proud to say that Unique Auto has delivered excellence in Myanmar for several years already. Our unique showroom is based in Mayagone, so feel free to havealook at our newest offers if you are in the area. Our team specializes selling and our team hasalot of expertise in this field. Importantly, we give best services for our customers .You are sure to have many safe and happy driving years ahead if you drive one of our vehicles, so we hope to be able to say you are one of our clients soon. Be sure to mention Motors.com.mm when you talk to us! ကျွန်တော်တို့ရဲ့Unique Auto Car Showroom ကတော့ ၀ယ်ယူသူ လူကြီးမင်းတို့ထံသို့ Grade ပြည့် ကားကောင်းကားသန့် များကိုသာ တင်သွင်းရောင်းချနေသော တစ်ခုတည်းသော ကားအရောင်းစင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Unique Auto Showroom တည်နေရာကတော့ မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လူကြီးမင်းတို့ လမ်းကြုံလမ်းသင့်ပါက ၀င်ရောက် လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့ Unique Auto Showroom မှာ အရည်အသွေးမြင့် ကားများကိုသာ အဓိကထား တင်သွင်းရောင်းချခြင်းဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းများကိုလည်း အများနှင့်မတူပဲ သင့်တင်မျှတစွာဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့ Showroom ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Showroom ကို စနေ၊တနင်္ဂနွေနဲ့ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များမှာပါ ပိတ်ရက်မရှိ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အတွက် ကုမ္မဏီဝန်ထမ်းနှင့် အစိုးရ၀န်ထမ်း ဖောက်သည်များအတွက်ပါ လာရောက်ကြည့်ရှုရန် အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် Grade ပြည့်ကားများသာ တင်သွင်း ရောင်းချနေခြင်းဖြစ်၍ ကားဝယ်ယူပြီးသူများအနေဖြင့် နှစ်ရှည်လများ အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းစွာနဲ့ စိတ်ချယုံ ကြည်စွာ သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အတွေးမမှားပဲ ယခုပင် ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်လိုက်ကြပါ။ ဆက်သွယ်လျှင် လည်း Motors.com.mm မှတစ်ဆင့် ရှာတွေ့ကြောင်း ပြောဖို့ မမေ့ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။” Ratings
There are no comments for Unique Auto! Be the first to comment!